जाडो मौसममा कपालको हेरचाह कसरी गर्ने ? (भिडियाेसहित)
काठमाडौं ।जाडो यामको सुरुवात भइसकेको छ । विशेषगरि जाडो मौसममा हामीलाई विभिन्न समस्याले सताउने गर्दछ । जसमध्येको एक हो कपालको समस्या । कपाल मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । यसले हामीलाई सुन्दर र आकर्षक मात्र देखाउँंदैन छालाको हेरचाह गर्नमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।जाडो मौसममा तपाईंले अनुभव गर्नुभएकै होला, जति जति जाडो बढ्दैछ, कपाल उत्तिनै रुखो भएको त्यसैले मौसम अनुसार कपालको हेरचाहमा फेरबदल गर्नु आवश्यक छ ।जाडो समयमा पर्याप्त कपालको हेरचाह र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । जाडोमा पर्याप्त हेरचाहको कमीले गर्दा कपालमा सुख्खापन आउने, चाया पर्ने, कपाल टुक्रने धेरैले झेल्दै आएको प्रमुख समस्या हो ।अझ यो मौसममा चिसोबाट जोगिन सामान्यतया स्कार्फ वा टोपी लगाइने गरिन्छ । यसले झन् हाम्रो कपाल बिग्रने गर्दछ । कपाललाई लामो समयसम्म बाँधेर, गुम्साएर राख्नाले कपालमा चिपचिपपन आउने गर्दछ । यसरी आउने चिपचिपपनले चायाँ पार्ने गर्दछ ।जाडोमा धेरैले चिसोबाट बच्न हिटरको प्रयोग गर्ने गर्छन् । यसले कपालमा भएको कोमलता कम गरिदिन्छ । त्यसैले चिसोमा छालाको सुरक्षामा हामी जुनरुपमा सजग हुन्छौं कपालको सुरक्षामा पनि त्यति नै ध्यान दिनु आवश्यक छ । सामान्यतया कपाल दिनमा १०० वटा झर्नै पर्छ । यदि हामी हप्तामा एक दिन मात्र नुहाउँछौँ भने ७ दिनमा ७०० कपाल झर्नुलाई सामान्य मानिन्छ । तर, यो भन्दा धेरै झरेमा भने राम्रोसँग हेरचाह गर्नुपर्छ ।चोट पटक लागेर, पोलेर, घाउ खटिरा आएर र फङ्गल इन्फेक्सनबाट कपाल झर्नुलाई स्कारिङ एलोपेसिया भनिन्छ । स्कारिङमा कपाल जरैबाट नष्ट भएको हुन्छ, यस्तोमा कपाल पुनः पलाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्तै, नन स्कारिङमा वंशाणुगत कारण मुख्य मानिन्छ । हर्मोनमा आउने परिवर्तनले कपाल झर्ने गर्छ । त्यसैगरी कुनै रोगका कारण पनि कपाल झर्न सक्छ । ﻿
७ मंसिर २०७७, आईतवार १८:०८
जाडो यामको सुरुवात भइसकेको छ । विशेषगरि जाडो मौसममा हामीलाई विभिन्न समस्याले सताउने गर्दछ । जसमध्येको एक हो कपालको समस्या । कपाल मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । यसले हामीलाई सुन्दर र आकर्षक मात्र देखाउँंदैन छालाको हेरचाह गर्नमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।
जाडो मौसममा तपाईंले अनुभव गर्नुभएकै होला, जति जति जाडो बढ्दैछ, कपाल उत्तिनै रुखो भएको त्यसैले मौसम अनुसार कपालको हेरचाहमा फेरबदल गर्नु आवश्यक छ ।
जाडो समयमा पर्याप्त कपालको हेरचाह र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । जाडोमा पर्याप्त हेरचाहको कमीले गर्दा कपालमा सुख्खापन आउने, चाया पर्ने, कपाल टुक्रने धेरैले झेल्दै आएको प्रमुख समस्या हो ।
अझ यो मौसममा चिसोबाट जोगिन सामान्यतया स्कार्फ वा टोपी लगाइने गरिन्छ । यसले झन् हाम्रो कपाल बिग्रने गर्दछ । कपाललाई लामो समयसम्म बाँधेर, गुम्साएर राख्नाले कपालमा चिपचिपपन आउने गर्दछ । यसरी आउने चिपचिपपनले चायाँ पार्ने गर्दछ ।
जाडोमा धेरैले चिसोबाट बच्न हिटरको प्रयोग गर्ने गर्छन् । यसले कपालमा भएको कोमलता कम गरिदिन्छ । त्यसैले चिसोमा छालाको सुरक्षामा हामी जुनरुपमा सजग हुन्छौं कपालको सुरक्षामा पनि त्यति नै ध्यान दिनु आवश्यक छ । सामान्यतया कपाल दिनमा १०० वटा झर्नै पर्छ । यदि हामी हप्तामा एक दिन मात्र नुहाउँछौँ भने ७ दिनमा ७०० कपाल झर्नुलाई सामान्य मानिन्छ । तर, यो भन्दा धेरै झरेमा भने राम्रोसँग हेरचाह गर्नुपर्छ ।
चोट पटक लागेर, पोलेर, घाउ खटिरा आएर र फङ्गल इन्फेक्सनबाट कपाल झर्नुलाई स्कारिङ एलोपेसिया भनिन्छ । स्कारिङमा कपाल जरैबाट नष्ट भएको हुन्छ, यस्तोमा कपाल पुनः पलाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्तै, नन स्कारिङमा वंशाणुगत कारण मुख्य मानिन्छ । हर्मोनमा आउने परिवर्तनले कपाल झर्ने गर्छ । त्यसैगरी कुनै रोगका कारण पनि कपाल झर्न सक्छ ।
Prevमन्त्रिपरिषद बैठक : बलात्कारमा संलग्न र मिलापत्र गराउनेलाई कडा सजाय
‘कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्दैन’ : भीम रावलNext
जाडोमा स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने ? (भिडियाेसहित)
जाडो मौसममा कपालको हेरचाह कसरी गर्ने ?
‘सामान्य नठानौं टन्सिल, यसैले निम्त्याउन सक्छ मुटुरोग’
काँग्रेसद्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना दर्ता
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट शुक्रबारसम्म ७१७ जनाको मृत्यु
कोरोना संन्त्रास : चीनमा मृत्यु हुनेको संख्या ४२५ पुग्यो
'कुनै हालतमा पनि नेकपा फुट्दैन' : वरिष्ठ नेता खनाल
सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै स्थानीयले बुझाए आयोगमा ज्ञापनपत्र
एकता मजबुत हुने आशामा नेकपाका नेता कार्यकर्ता, शीर्ष नेताहरु भने आन्तरिक झगडामै